बाह्रखरी उत्कृष्ट कथा गन्ध
बेथान पुलिस चौकीको हवल्दार हस्याङफस्याङ गर्दै आयो ।
“सर, टिपरले किचेर मान्छे मार्यो,” उसले इन्स्पेक्टरलाई स्यालुट मार्दै भन्यो ।
“कुन ठूलो कुरो भयो र ?” हडबडाएर पत्रिका पढिरहेको पुलिस इन्स्पेक्टरले हवल्दारतिर हेरेर भन्यो, “के रे, के भयो रे ?”
“टिपरले किचेर मान्छे मान्यो रे,” हवल्दारले भन्यो ।
“मारेको कि मरेको ?” इन्स्पेक्टरले भन्यो ।
“मारेको भन्छन् सर,” हवल्दारले भन्यो ।
“कसले भनेको ?” जङ्गिँदै इन्स्पेक्टरले भन्यो ।
“गाउँका मान्छेले । सडकमा भीड जम्मा भइसक्यो । चक्काजाम पनि गरिसके । टिपर जलाउन खोज्दै छन् । छिटो जाऊँ सर,” हतारिँदै हवल्दारले भन्यो ।
“अचेल सबैले यस्तै भन्छन्,” कुर्सीबाट जुरूक्क उठेर इन्स्पेक्टरले भन्यो, “लौ हिँड् त ।”
इन्स्पेक्टरले पढिरहेको पत्रिका टेबलमा फाले जसरी राख्यो । कम्मरमा पेस्तोल भिर्‍यो । टोपी लगायो । अनि हातमा वाकिटकी लियो । अब चाहिँ ऊ साँच्चिकै इन्स्पेक्टर देखियो ।
घ्याच्च रोकियो पुलिसको भ्यान । गुटुटुटु निस्किए पुलिसका डफ्फा । हतियारधारी पुलिसलाई देखेर भीड अलि पछाडि हट्यो । टिपरमा आगो लगाइसकेछन् । आधा जलिसकेछ टिपर । ड्राइभर फरार । टिपरले किचेर मरेको युवकको लास चाहिँ सडकमै रहेछ । सेतो कपडा नपाएर कालै कपडाले छोपिदिएछन् लासलाई । लासको अनुहार पूरै छोपिएको थियो । इन्स्पेक्टरले लठ्ठीले कपडा हटाएर लासको अनुहार हेर्‍यो । अनुहार नचिनिने भइसकेको थियो । तैपनि उसले चिने जसरी हल्का टाउको हल्लायो । उसले किन टाउको हल्लायो, त्यो भीडले बुझ्न सकेन अथवा बुझ्ने चेष्टा पनि गरेन ।
“हत्यारालाई कारबाही गर्,” भीडले नारा लाउन थाल्यो । भीड उत्तेजित हुने शङ्कामा पुलिस सतर्क भए । पुलिस सतर्क भएको देखेर आइमाई, केटाकेटी र बूढाबूढी डराए । पुलिसलाई रिस उठेपछि जे पनि हुन सक्छ । लाठी आफैं उठ्छ । बन्दुक आफैं भुक्छ । २०४६ सालको जनआन्दोलनमा यस्तो भएको थियो । २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा पनि यस्तै भएको थियो । उता मधेस आन्दोलनमा पनि यस्तै भएको थियो । त्यसैले आइमाई, केटाकेटी र बूढाबूढी भीडबाट पछि हटेर सडकको किनारमा उभिए । कोहीकोही त किनार पनि छिचोलेर खेततिरै पुगे । युवाको भीडले सडक ओगटेर बसे । लासको वरिपरि घुमेर नारा लगाइरहे, “हत्यारालाई कारबाही गर् ।”
खोक्दैखोक्दै र घण्टी बजाउँदै आइपुग्यो, एउटा पुरानो र रोगी दमकल । दमकल आइपुग्दासम्म टिपर जलेर कालो न कालो कङ्काल जस्तै भइसकेको थियो । दमकलका कर्मचारीले त्यही कङ्कालमा पानीको फोहोरा हानेर आफ्नो कर्तव्य पूरा गरे ।
टिपरको आगो निभ्यो । भीडको मनमा लागेको आगो निभेन, बलिरह्यो । त्यसैले नारा लागिरह्यो, “हत्यारालाई कारबाही गर् ।” तुलनात्मक रुपमा भीड शान्त नै देखियो । नत्र भीडले यसरी पनि नारा लाउन सक्थ्यो, “हत्यारालाई फाँसी दे ।” सौभाग्य भन्नु कि दुर्भाग्य, नेपालमा फाँसी दिने कानुन नै छैन । नत्र अहिलेसम्म धेरैले फाँसीको सजाय पाइसक्थे ।
इन्स्पेक्टरले वाकिटकीमा कोड भाषामा कुरा गर्‍यो । उसले कोसित कुरा गर्‍यो, के कुरा गर्‍यो, त्यो भीडलाई थाहा भएन । भीडले हेरी मात्रै रह्यो, सुन्न सकेन अथवा बुझ्न सकेन, भीडकै आवाजले गर्दा ।
मुचुल्का नै नउठाई पुलिसले लास उठायो र भ्यानमा हालेर लिएर गयो । मृतकका आफन्त आइपुगेकै थिएनन् । उनीहरूले मृतकको अनुहारसम्म पनि हेर्न पाएनन् । मृतकका आफन्त आइपुग्दा भीड कम भइसकेको थियो । मृतक युवकका बाबुआमा सडकमै लडिबुडी गरेर छाती पिटीपिटी रून थाले । बूढा बाबु रूँदारूँदै बेहोस जस्तै भयो । आमा त मूच्र्छा नै परिन् । गाउँलेले सम्हाले दुवैलाई ।
लास लगे । पुलिस पनि गए । चक्काजाम बाँकी नै रह्यो । यताका सवारी यतै रोकिए । उताका सवारी उतै । यात्रु अलपत्र परे । मृतक युवकका बाबुआमाको जिन्दगी अलपत्र पर्‍यो । बुढेसकालको सहारा नै टुट्यो ।
युवक सहरमा पढ्दै थियो । दुई दिनअघि मात्रै बिदामा घर आएको थियो । साह्रै जेहेनदार थियो । गाउँभरिमा धेरै पढ्ने थोरैमध्ये ऊ पनि एउटा थियो । मित्रवत् थियो । सहयोगी थियो । भलादमी थियो । सबैले भन्थे– आँखामा राखे पनि नबिझाउने थियो ।
थियो । अब छैन । उसको अभाव गाउँलेले धेरै नै महसुस गरिरहेका छन् । गाउँको मोती हराए जस्तो । गाउँको ज्योति हराए जस्तो । बाँचिरहेको भए ऊ सायद गाउँको मोती नै बन्ने थियो । गाउँको ज्योति नै बन्ने थियो । अब ऊ छैन । त्यसैले गाउँलेले गाउँ रित्तो देखे । अँध्यारो देखे ।
उसको बाबुले कस्तो सपना देखेको होला ? आमाले कस्तो सपना देखेकी होलिन् ? बहिनीले पनि कस्तो सपना देखेकी होली ? सबैको सपना चकनाचुर भयो । बाबुआमाको बुढेसकालको लौरो नै भाँचिए जस्तो भयो । सहारा नै टुटे जस्तो भयो । बहिनीको पनि भरोसा टुटे जस्तो भयो ।
ऊ अन्याय र अत्याचार सहँदैनथ्यो । ऊ गाउँलेको दुःख र पीडा हेर्न सक्दैनथ्यो । त्यसैले ऊ गाउँलेको न्यायका लागि लड्थ्यो । सेवासुविधाका लागि खट्थ्यो । त्यसैले गाउँलेको प्रिय थियो । तर जो अन्याय गर्थे, तिनका लागि भने ऊ निकै अप्रिय थियो । तिनीहरूका लागि उसको उपस्थिति मात्रै पनि असह्य थियो ।
गाउँनजिकको बगाहा खोलामा क्रसर उद्योग खुल्यो । दर्जनौं टिपरले गिट्टी, बालुवा र ढुङ्गा ओसार्न थाले । उसले त्यो टुलुटुलु हेरिरहन सकेन । गाउँकै जनप्रतिनिधिले जस्तो देखेर पनि नदेखे जस्तो पनि गरिरहन सकेन । उसकै नेतृत्वमा त्यो क्रसर उद्योगको पटकपटक विरोध गरिएको थियो । तर हरेक पटक ऊ पराजित भएको थियो । जित क्रसर डनकै हुन्थ्यो । क्रसरको उद्योगीको दादागिरीले गाउँले त्रस्त थिए । त्यसैले क्रसर उद्योगीलाई गाउँलेहरू क्रसर डन भन्थे ।
उसको साथमा गाउँले थिए । तर क्रसर डनको साथमा गाउँले होइन, गाउँका जनप्रतिनिधि थिए । जिल्लाका नेता थिए । हाकिम थिए । पुलिस प्रशासन थियो । अनि थिए केही चुल्ठे, मुन्द्रे र जगल्टे पनि । त्यसैले ऊ सधैं पराजित हुन्थ्यो । तैपनि उसले हार मानेको थिएन । गाउँलाई बचाउन ऊ प्रयत्नरत थियो । भन्थ्यो, “यो क्रसर उद्योगले हाम्रो गाउँलाई बर्बाद पार्छ । हाम्रो इनार, कुवा, बोरिङ सबै सुक्छन् । खोला गहिरिन्छ । हाम्रो खेत बाँझो पर्छ । हाम्रो उठीबास लाउँछ ।”
उसको कुरा कतिले बुझेका थिए । कतिले बुझेका थिएनन् । बुझ्नेहरू उसको पक्षमा थिए । नबुझ्नेहरू तटस्थ नै थिए । तर गाउँका नेता र कार्यकर्ता चाहिँ क्रसर डनकै पक्षमा थिए । किनेका थिए, उनीहरूलाई क्रसर डनले । उनीहरू बिकेका थिए ।
“हाम्राविरूद्ध बढी उचालिएर हिँड्ने होइन । परिणाम राम्रो हुँदैन,” यसरी पटकपटक उसले धम्की खाएको थियो । कहिलेकाहीँ क्रसर डनले आफ्ना चम्चाहरूलाई यसो पनि भन्थे, “हाम्रो विरोध गर्न आउनेलाई टिपरले किचेर मारिदिनू र जेसिबीले खाल्डो खनेर पुरिदिनू ।” गाउँले आतङ्कित थिए । ऊ भने नडराई क्रसर उद्योगको विराध गथ्र्यो ।
साँच्चै परिणाम नराम्रै भयो । उसले क्रसर उद्योगको विरोध गर्‍यो । उसलाई टिपरले किचेरै मारे ।
कलेज बिदामा घर आएदेखि नै ऊ क्रसर उद्योगविरूद्ध आवाज उठाउन गाउँ घुमिरहेको थियो । गाउँ घुम्ने क्रममा ऊ साथीसँगै साइकलमा गइरहेको थियो । उसका पछिपछि दुइटा मोटरसाइकल आए । उनीहरूलाई उछिनेर मोटरसाइकल रोके । मोटरसाइकलबाट ओर्लेर एउटाले हकारे झैं गरी भन्यो, “तिमीहरूमध्ये राजेन्द्र भन्ने को हो ?” बिहान झिसमिसेमै सायद मान्छे चिन्न गाह्रो थियो ।
उसले जोसिएर भन्यो, “म हुँ राजेन्द्र । तिमीहरू चाहिँ को हौ ?”
“अब चिन्छस् हामी को हौं भनेर,” यसो भनेर मोटरसाइकलमा आएका चारै जनाले उसलाई गोद्न थाले । एउटाले उसको दाहिने कोखामा फलामको लिभरले घोचिदियो । ऊ घाइते भएर त्यहीँ लड्यो । उसको साथी भागेर गाउँतिर गयो । गाउँलेलाई लिएर फर्केर आउँदा एउटा टिपर उसलाई किचेर भाग्दै थियो । टिपरको पछिपछि मोटरसाइकल पनि भाग्दै थिए । ऊ चाहिँ निष्प्राण भइसकेको थियो । अनुहार पनि चिन्न सकिने अवस्था थिएन उसको । गाउँले स्तब्ध भए ।
चर्को आवाज निकालेर केही मोटरसाइकल आए । तिनमा चुल्ठे, मुन्द्रे र जगल्टेहरू सवार थिए । भीडकै सामुन्ने रोके मोटरसाइकल । सिनेमाका खलनायकहरू उत्रिए झैं उत्रिए मोटरसाइकलबाट । उसैगरी अघि बढे भीडतिर । एउटा जगल्टेले हुङ्कार गर्‍यो, “को हो यो टायर बाल्ने ?” कोही बोल्न सकेनन् । सबै जना डराए । एक जना थियो ऊ, अलि निडर । अब ऊ छैन । त्यसैले बोल्ने साहस कसैमा भएन । सबै जना चुपचाप बसे । बरू त्यो जगल्टेको हुङ्कार सुनेर उभिएको ठाउँबाट बिस्तारै पछि हट्दै गए । शान्तिसुरक्षाको आभास कसैलाई भइरहेको थिएन । मुलुकमा जनताको लोकतन्त्र अथवा गणतन्त्र छ भन्ने अनुभूति कसैलाई थिएन ।
जगल्टेले बलिरहेको टायर यताउता छरिदियो । त्यो काममा उसलाई चुल्ठे र मुन्द्रेहरूले पनि साथ दिए । एकैछिनमा त्यो दन्दनी बलिरहेको आगो निभ्यो । आगो के निभेको थियो, यता र उता अघिदेखि अधीरतासाथ रोकिइराखेका सवारी तँछाडमछाड गर्दै अघि बढे । सवारीसाधन अगाडि आएपछि चक्काजाम गर्दै सडकमा उभिएको भीड आफैं पछि हट्दै गयो । अब सडक पनि खुल्यो । सवारीहरू निर्बाध गुड्न थाले ।
गुन्डाराजको एउटा उदाहरण प्रत्यक्ष देखियो त्यहाँ ।
“अब कोही सडकमा आउने होइन । कसैले टायर बाल्ने होइन । नत्र...,” फेरि एउटा चुल्ठेले हुङ्कार गर्यो ।
“नत्र के गर्छस् ?” असह्य नै भएछ क्यारे ! एउटा युवक जोसिँदै अघि बढ्यो । कोही त बाँकी रहेछ अन्यायविरूद्ध आवाज उठाउने । तर दुर्भाग्य, उसलाई साथ दिने कोही निस्केनन् । त्यसपछि ती चुल्ठे, मुन्दे्र र जगल्टेहरूले उसलाई गोल्टिन ठटाए झैं ठटाए । कुटाइ खाएर बेहोस भएपछि उसलाई खेतमा लगेर फालिदिए ।
अब त झन् भीड छिटोछिटो पछि हट्न थाल्यो । मान्छेहरू बिस्तारै आआफ्नो घरतिर हिँड्न थाले । मृतक युवकका रोइरहेका बूढा बाबुआमालाई दुई जना अधबैंसेले डोर्‍याउँदै लिएर गए । मृतककी बहिनी आँसु पुछ्दै बाबुआमाको पछि लागी । उसलाई चुल्ठे, मुन्द्रे र जगल्टेले घुरेर हेरे । ऊ डराई । डरले छिटोछिटो पाइला चाल्न थाली । बाबुआमाभन्दा अघि हिँड्न थाली । महाभारतमा दुःशासनले द्रौपदीको चीरहरण गरेको दृश्य उसका आँखामा घुम्न थाले । अनि दुःशासन जस्तै लाग्ने ती चुल्ठे, मुन्द्रे र जगल्टेहरूबाट आफ्नो अस्मिताहरण हुने डरले छिटोछिटो हिँड्न थाली ।
पीडितलाई नै थप पीडा दिने कस्तो जमाना आयो ? पिटाइ खाने त्यो युवक पनि होसमा आएपछि उठेर बिस्तारै आफ्नो घरतिर लाग्यो । सडक सुनसान भयो । मानौं, एकछिन अघि त्यहाँ केही भएकै थिएन । हिन्दी फिल्ममा जस्तै ।
मृतक युवकको बूढा बाबुसहित पीडितको एक समूह जाहेरी दिन पुलिस चौकी पुगे ।
“यो किटानी जाहेरी लिन मिल्दैन,” इन्स्पेक्टरले टेबलतिर घोप्टिएर भन्यो ।
“किन लिन मिल्दैन, इन्स्पेक्टर साब ?” कमजोर शरीर भएको बूढो बाबुले थररर काँप्दै सोध्यो ।
“यो दुर्घटना हो । त्यसैले मिल्दैन,” इन्स्पेक्टरले उसैगरी टेबलमा घोप्टिएर भन्यो ।
“होइन । यो सरासर सुनियोजित घटना हो । बाटो हिँडिरहेको मान्छेलाई कुटपिट गर्नु अनि घाइतेलाई फेरि टिपरले किचेर मार्नु पनि दुर्घटना हो ?” एउटा युवकले एक कदम अघि सरेर पुलिस इन्स्पेक्टरको नजिकै गएर भन्यो ।
इन्स्पेक्टरसित यो प्रश्नको जवाफ थिएन । उसले त्यो युवकलाई घुरेर हेर्यो । युवकले पनि उसैगरी घुरेर हे¥यो इन्स्पेक्टरलाई ।
“मिल्दैन भनेपछि मिल्दैन,” यस पटक इन्स्पेक्टरले फेरि पनि टेबलमा घोप्टिएर अलि नरम भएर भन्यो ।
“किन मिल्दैन भन्ने कुराको उचित जवाफ चाहिन्छ,” यस पटक सामूहिक रुपमै युवा आवाज गुन्जियो । अब चाहिँ इन्स्पेक्टर अलि गले जस्तो देखियो । अलि रिसाए जस्तो गरेर उसले जाहेरी बुझिलिन अर्को पुलिसलाई अह्रायो । आदेशअनुसार त्यसले जाहेरी दर्ता गरिदियो । अब चाहिँ दोषी पक्राउ पर्छ कि ! न्याय मिल्ला कि ! मृतक युवकको बूढा बाबुको मनमा आशा जाग्न थाल्यो ।
हिँड्नै लाग्दा पुलिस इन्स्पेक्टरले मृतकको बूढा बाबुको कानैनिर आएर मसिनो स्वरमा सुटुक्क भन्यो, “बा, जे हुनु भइसक्यो । अब क्षतिपूर्ति लिएर मिल्नुस् र चुप लाग्नुस् । किन यो लफडामा लागिरहनुहुन्छ ?”
बूढा बाबुलाई इन्स्पेक्टरको सासबाट घुसको गन्ध आए जस्तो लाग्यो । अनि यसो उसको मुखमा हेरेर उसैगरी मसिनो स्वरमा भन्यो, “क्षतिपूर्तिले मेरो छोरो फर्किन्छ र इन्स्पेक्टर साब ?”
इन्स्पेक्टरले केही बोलेन । सन्केर अर्कोतिर लाग्यो ।
जाहेरी मात्रै दर्ता भयो । दोषी पक्राउ परेन । आज परेन । भोलि परेन । पर्सि पनि परेन । पर्दै परेन । गाउँले सबै मिलेर चौकी घेरेपछि बल्ल दोषीलाई तुरून्त पक्राउ गर्ने आश्वासन दियो, इन्स्पेक्टरले । दोषीलाई पक्राउ गर्ने आश्वासन पाएपछि गाउँले जनता खुसी भए । मृतक युवकको बूढा बाबुको मनमा पनि न्याय पाउने आशा जाग्यो ।
“दोषीलाई पक्राउ गर्न पनि दबाब नै दिनुपर्ने । दोषीलाई पक्राउ गर्दा पनि खुसी हुनुपर्ने । कस्तो विडम्बना ! कस्तो देशमा जन्मेछौं हामी ! कहाँ छ हाम्रो न्यायप्रशासन ?” गाउँकै स्कुलमा पढाउने एउटा मास्टरले थाप्लामा हात लाएर भन्यो । सबै जनाले अचम्म मानेर उसका कुरा सुनिरहे ।
अझैसम्म दोषी पक्राउ परेन । पुलिसको अभिलेखअनुसार फरारको सूचीमा छ दोषी टिपर चालकको नाउँ । तर दोषी टिपर चालक क्रसर डनसँगै सानले बसिरहेको छ, हिँडिरहेको छ । क्रसर डन गाउँमै छाती फुलाएर घुमिरहेको छ । बाघ जस्तै निर्धक्क डुलिरहेको छ । उसलाई देखेर गाउँले त्रस्त छन् ।
जनताले अचम्म मानेका छन् दोषी टिपर चालक र चालकलाई संरक्षण दिने क्रसर डनलाई नपक्रिएकोमा । सबैको मनमा एउटै प्रश्न छ, किन नपक्रिएको होला उनीहरूलाई । सोझा गाउँले जनता पुलिसको काम दोषी र अपराधी पक्रनु हो भन्ने मात्रै बुझ्छन् । कसैको इसारामा दोषीलाई नपक्रिनु पनि उसको काम हो भन्ने कुरा बुझ्दैनन् । अहिले दोषीलाई नपक्रिनुमा पनि त्यस्तै इसारा नै कारण बनेको छ सायद, जो सोझा जनता बुझ्दैनन् र बुझ्न सक्दैनन् पनि । बुझ्न सक्नेहरू मौन छन् । मौन बस्नुपर्ने पनि अनेक कारण छन् । त्यो पनि सोझा जनताहरू बुझ्दैनन् र बुझ्न सक्दैनन् ।
उसका बूढो बाबुलाई लिएर गाउँले जनताहरू स्थानीय जनप्रतिनिधिकहाँ गए पीडा सुनाउन । गुनासो गर्न । न्याय माग्न । जनताको आशा र भरोसाका केन्द्र हुन् जनप्रतिनिधि । तर जनताको पीडा र गुनासो सुन्ने जनप्रतिनिधिका कान बहिरो भइसकेका रहेछन् । उनीहरूले केही सुनेनन् । मुखमा बुजो लागिसकेको रहेछ । उनीहरूले पीडितका पक्षमा केही बोलेनन् । न्याय पनि दिएनन् । जनता निराश भए । जनताको पीरमर्का नबुझ्ने केको जनप्रतिनिधि ? जनताले आफैंले आफैंलाई पोखे गुनासो । चुनाव फेरि पनि त आउँछ नि । जनताले भन्न सक्ने यत्ति हो । यस्तै भनेर चित्त बुझाए । तर सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनता सधैं निरीह थिए । निरीह नै छन् । सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनताभन्दा अरू नै शक्तिशाली बनेका छन् । त्यस्तो शक्ति अरू नै कुराबाट प्राप्त गरेका छन् । के यो लोकतन्त्रको शोभा हो ?
जनताको पीडा र गुनासो गाउँका जनप्रतिनिधिले सुनेनन् । जिल्लाको प्रशासनले त सुन्ला कि ! जनतामा यही आशा थियो । त्यसैले उनीहरू पीडा र गुनासो सुनाउन अनि न्याय माग्न जिल्ला गए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय गए । त्यहाँ गएर उनीहरूले पीडितका लागि न्याय मागे । दोषीलाई पक्रन र क्रसर उद्योग बन्द गरेर गाउँलाई बचाउन माग गरे । तर जिल्लामा पनि त्यस्तै भयो, जस्तो गाउँमा भएको थियो । त्यहाँ पनि पीडा र गुनासो सुन्नेको कान बहिरा भइसकेछन् । जिल्लाले पनि जनताको पीडा बुझेन । गुनासो पनि सुनेन । जनतालाई न्याय पनि दिएन । खालि आश्वासन मात्रै दियो । भन्यो, “क्षतिपूर्ति लिएर मिल्नू ।” के क्षतिपूर्तिले मरेको मान्छेको ज्यान फिर्ता आउँछ ? प्रश्न छ, उत्तर छैन ।
पीडक त आफ्नै गाउँमा डुलिरहेका छन् । क्रसर डन र टिपर चालक पनि । पीडकलाई आफ्नै गाउँ वरिपरि देखेर जनता फेरि छक्क परे । जनताको काम सायद छक्क पर्नु मात्रै रहेछ । गाउँमा चुल्ठे, मुन्द्रे र जगल्टेको बाक्लै उपस्थिति बढेको छ । सदा झैं खोलाबाट बालुवा, गिट्टी र ढुङ्गा बोकेर टिपरहरू बाक्लै गुडेका छन् । आफूलाई पनि त्यही टिपरले किच्ने हो कि ? गाउँले झन् त्रस्त छन् ।
मृतक युवकको बाबुको आँखामा आँसु सुकेको छैन । आमाको भक्कानो रोकिएको छैन । बहिनीको मनबाट आफू असुरक्षित हुनुको भय र त्रास हट्न सकेको छैन । घर सुनसान छ मुर्दाघर जस्तो । त्यो एउटा घरबाहेक अरू कुरा सबै सामान्य नै छन् । मानौं, त्यो गाउँमा हिजोअस्ति केही भएकै थिएन । कसैको छातीमा फलामको लिभरले रोपिएकै थिएन । कसैलाई टिपरले किचेर मारेकै थिएन । कसैलाई मरणासन्न हुने गरी कुटिएकै थिएन । गणतन्त्रमा डनतन्त्र हाबी भयो । यस्तो पनि हुन्छ ? किन हुन्छ यस्तो ? के लोकतन्त्रमा यस्तै हुन्छ ? कसैसित छैन यसको जवाफ । जवाफ दिन जो जिम्मेवार छन्, तिनको मुखमा बुजो लागेको छ ।
आँखामा आँसु, छातीमा पीडा र झोलामा सामलतुमल अनि केही सहयोगी साथमा लिएर मृतक युवकको बाबु आफ्नो पीडा र गुनासो पोख्न सिंहदरबारसम्म पुग्यो । तर सिंहदरबारले पनि सुनेन पीडितको पीडा, वेदना र गुनासो । सिंहदरबारले पनि दिएन न्याय । बरू भन्यो, अब त गाउँमै सिंहदरबार पुगिसकेको छ । त्यहीँ गएर सुनाऊ, आफ्नो पीडा, वेदना र गुनासो । अनि त्यहीँ गएर माग न्याय ।
न्याय माग्न गाउँबाट रूँदै गएको थियो, उसको बूढो बाबु । रूँदैरूँदै गाउँ फर्कियो रित्तै । गाउँले दिएन न्याय । जिल्लाले दिएन न्याय । सिंहदरबारले पनि दिएन न्याय । अब कुन ठाउँ बाँकी छ गरिबले न्याय माग्न जाने ठाउँ ?
“यो लोकतन्त्रले कति साह्रै रूवाएको गरिबलाई ! अब न्याय माग्न कहाँ जाऊँ भगवान् ?” बूढो बाबुले आकाशतिर हेरेर भन्यो । तर आकाश पनि बोलेन । आकाशलाई कालो बादलले ढाकेको थियो ।
मरेपछि पनि गरिबको दुःख सकिँदैन । संस्कार बाँकी रहन्छ । हो, अब उसको पनि अन्तिम संस्कार गर्न बाँकी नै थियो । उसको लास पोस्टमार्टमका लागि अस्पताल लगिएको थियो । लास बुझिलिन उसको बाबु र गाउँले गुठियारहरू अस्पताल पुगे । लास लिन अस्पतालको मुर्दाघर पुग्दा त्यहाँबाट चर्को गन्ध आइरहेको थियो । सबैले नाकमुख थुने ।
मुर्दाघरबाट पुलिस, प्रशासन र न्याय कुहिएको गन्ध आइरहेको थियो ।